အံ့ဩဖွယ် အစွမ်းများနဲ့ “Beavers (Castor)” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အံ့ဩဖွယ် အစွမ်းများနဲ့ “Beavers (Castor)”
အံ့ဩဖွယ် အစွမ်းများနဲ့ “Beavers (Castor)”
Posted by Iris on Jan 26, 2013 in Arts & Humanities, Sciences & Resources | 33 comments
ဒီထူးဆန်းလှတဲ့ Beaver သတ္တဝါလေးတွေအကြောင်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ တဲ့ သူက ကျမ၇ဲ့ project ”Pipe Laying Vessel “ ရဲ့ Client Company မှ အမေရိကန် တစ်ယောက် ရယ်ပါ. ကျမ တို့ ရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်စဉ်က အနည်းငယ်ကမောက်ကမနိင်လွန်းတယ် ထင်ပါတယ်. မြန်မာလူမျိုး ကျမ အလုပ် လုပ်တဲ့ စင်ကာပူ shipyard တစ်ခုမှာ သဘောင်္ အသစ်လာ ဆောက်တဲ့အီတလီယန် ကုပ္မဏီရဲ့ Client အမေရိကန် ကုပ္မဏီရဲ့ မန်နေဂျာ…အင်း..နဲနဲလေးတော့ဟာသမြောက်နေတယ်လို့ ထင်မိတယ်.
ကျမတို့ ၇ဲ့ project pipe laying vessel ရဲ့ အမည်က “CastorONE” ရယ်ပါ. ကျမဘဝ မှာအမှတ်တရတွေမြောက်များစွာနဲ့ တော်တော်လေးပင်ပန်းခဲ့Project တစ်ခုပေါ့ . ကျမရဲ့အမြင်အချို့ ကို လည်း ပြောင်းလဲပေးခဲ့ တယ်. အင်း..အချိန်ရခဲ့ ရင် အဲဒီအတွေ့ အကြုံတွေ ကိုရှယ်ချင်ပါသေးတယ်. အခုတော့Beaver အကြောင်းပဲပြောကျစို့ …………
ကျမရဲ့ မိတ်ဆွေ စင်္ကာပူကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ လာတဲ့ အခါမှာ ကျမကို အီတလီယန် ညစာ ဖိတ်ကြွေး ပြီး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ကျမတို့ ရဲ့ Project CastorONE အကြောင်းပြောကြရင်း သူကကျမကိုပြောတယ် Castor ဆိုတာ Beaver တဲ့ . အင်း..ကျမက Beaver ဆိုတာ ဘာကောင်မှန်းလဲမသိ. ဒါပေမဲ့ ဘယ်ရမလဲ Google မှာရှာပစ်လိုက်တယ်…တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သူတို့ ရဲ့သဘာဝကိုနည်းနည်းလေးသိခွင့် ရခဲ့ တယ်. သူကြီး တို့ ဦးကြောင် တို့ က Beaver အကြောင်းကိုကောင်းကောင်း သိပါလိမ့် မယ်. US က Beavors တွေကတော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်.
Beaver တွေဟာနိူ့ တိုက် သတ္တ၀ါမျိုးနွယ်ဝင်တွေပါ. သူတို့ ဟာအသက် ၂၄ နှစ်အထိသက်တမ်းရှိပါတယ်. သူတို့ ဟာ လူတွေပြီးရင် ဒုတိယမြောက် သူတို့ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောင်းလဲ နိူင်သူတွေပါပဲ.အပင်တွေကိုသူတို့ ရဲ့ သန်မာလှတဲ့ သွားတွေနဲ့ကိုက်ဖြတ် ပစ်ပြီး သူတို့ အတွက် နေအိမ်တွေ ရေကာတာတွေကိုကောင်းကေင်း ဆောက်တက်တဲ့Landscape Architecter သမားတွေပေါ့ ….
ချစ်စရာကောင်း တဲ့Beaver လေးပါ..
Beaver ကိုက်ဖြတ်ထားတဲ့ သစ်ပင်ပေါ့ .သူတို့ ဟာသစ်ခုတ်သမာကောင်းတွေလဲဖြစ်နိူင်ပါတယ်.
Beaver တွေရဲ့ အိမ်..
Beaver တွေဆောက်ထားတဲ့Beaver Dam..
သူတို့ ဟာအလုပ်အရမ်းလုပ်တဲ့သတ္တ၀ါလေးတွေပေါ့ ….ဒါကြောင်. အင်္ဂလိပ် အသုံးအနှုန်းမှာ-“ to beaver” ကို “to work hard and constantly” လို့ အဓိပ်ပါယ် သတ်မှူတ်ကျပါတယ်….
၀န်ခံချက်- ကျမ မိတ်ဆွေရဲ့ ပြေပြချက်များကိုအခြေခံပြီး Wiki ,Google နှုင့် National Geography မှမြီငြမ်းပါတယ်…
ဒီဂဇက်မှာ အခြားတစ်ယောက်တင်ပြီးသွားရင်လဲ ကျေးဇူးပြုပြီး သည်းခံပေးပါ..ကျမရဲ့ ပထမ ဦးဆုံးသော Post ရယ် ကျမနှစ်သက်မိတဲ့အံ့သြစရာ သူတို့ သဘာဝ တွေကို Share ချင်တာပါ…
Ref : http://en.wikipedia.org/wiki/Beaver
ကျုပ်လည်း ခုမှ သိတာဗျ …
ခုလို ပြောပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ….
ဒါနဲ့ ဒီအကောင် ပုံစံကို မြင်တော့ မြင်ဖူးသလိုလိုပဲ …
ဘာကောင်နဲ့ တူနေလဲတော့ စဉ်းစား မရဘူး ….
Le Le ရေ ကြိုဆိုပါတယ်ကွယ် ။
” တော်တော်လေးပင်ပန်းခဲ့Project တစ်ခုပေါ့ .
ကျမရဲ့အမြင်အချို့ ကို လည်း ပြောင်းလဲပေးခဲ့ တယ်.
အင်း..အချိန်ရခဲ့ ရင် အဲဒီအတွေ့ အကြုံတွေ ကိုရှယ်ချင်ပါသေးတယ် ”
လူတစ်ယောက် ရဲ့ အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ ၊
အတွေ့အကြုံတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် ။
ရေးဖြစ်အောင် ရေးတင်ပါနော် ။
@အံစာတုံးရေ ဟုတ်တယ် ကျမလည်း ဒီလ ၁၈ ရက်နေ့ ကမှသူတို့ အကြောင်းကိုသိရတာ. အရမ်းတော်တဲ့ သတ္တ၀ါလေးတွေပါပဲ. သူကြီး နဲ့ ဦးကြောင်က detail ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်..
@အဘ FR ရေ…အချိန်ရရင် ကျမ ကြိုးစားပြီးရေးပါမယ်. ကျမရဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါ. တခြားကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲတွေ မဟုတ်ပါဘူး
၁-၁-၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကူးမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး ဘာ့ကြောင့်များ ရေမြောင်းတွေ၊ ကန်တွေကို ရိုက်ပါလိမ့်လို့ တွေးမိပြီး ပထမပိုစ့်ကို ပြန်ဖတ်လိုက်မိတယ်။
Beavors ပုံကို ကြည့်ပြီး ကြွက်လို့ပဲ ထင်နေတာ။
သစ်ခုတ်သမားလို အစွမ်းထက်မယ် မထင်လိုက်မိဘူး။ :harr:
အခုမှ စပြီးပိုစ့်တင်တာဖြစ်ပေမယ့် တစ်နေ့တစ်ပုဒ်တင်နိုင်တဲ့ ရေးအားက မနည်းဘူး။
ဆက်လက်ပြီး လီလီရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေ မျှဝေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ :hee:
ကျေးဇူးပါ အန်တီမမ…ကျမကိုလည်းစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံစစ်ပေးနိုင်ပါတယ်..ဟိဟိ..ကျမကဂေဇက်ရဲ့ ပရိတ်သတ် တဦးပါ. အချိန်မရလို့ မန်ဘာဝင်ပြီးစာမရေးဖြစ်တာပါ. Beaver (Castor) ကြောင့်သာမဟုတ်ရင် ရေးဖြစ်အုံးမယ်မထင်ဘူး. ဟုတ်တယ် အန်တီမမ သူတို့ ကကြွက်နဲ့ဆင်တယ် ဒါပေမဲ့ အကောင်ပိုကြီးတယ် ရေကုးကျွမ်းတယ်.. ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားလည်းရှိတယ်. သူတို့ သစ်ခုတ်တာ ကျမလည်း သဘောကျတယ်. သူတို့ အိမ်ကိုရွှံ့ တွေရယ်ခုတ်ထားတဲ့ သစ်တွေရယ်နဲ့ဆောက်ထားတာ. ရွှံ့ တွေကကျောက်ခဲတွေလို မာကြောပြီး အလွယ်တကူ သူတို့ ရဲ့ အိမ်ကို မဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးတဲ့. ကျမ ကသူတို့ ဘယ်လိုအဲဒီ သစ်ပင်တွေကိုသယ်လဲသိချင်နေတာ.
အယ်…. နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားသူ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပါပေါ့လား။
အန်တီ မမ.. အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး. ကောင်းသတင်းမွှေးတာပါ. စကားအတင်းစပ် (Credit to သူကြီး). ကျမလည်း ဧရာဝတီတိုင်းကပါ. ကျမတို့ ရွာကသေးသေးလေးရယ်. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်းခက်ခဲတယ်. အခုတော့ တိုးတက်လာပြီလားမသိဘူးရယ်.
နောက်တာပါ လီလီ ရယ်။
လီလီ ရဲ့ ရွာသက်ကြည့်ရတာ မနည်းဘူးထင်တယ်။
ခုလဲ ရွာသူား ဖြစ်သွားပြီမို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ခွင့်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ :hee:
ခုလဲ ရွာသူား ဖြစ်သွားပြီမို့ ရင်းနှီးခင်မင် ခွင့်ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ :hee:
ငယ်ငယ်က စာထဲဖတ်မှတ်ဖူးတာကတော့ ဘီဗာဖျံ လို့ သုံးပါတယ်။
မြေအောက်ကနေ ကြွက်လို တွင်းတူးသွားပြီး ကိုက်ထားတဲ့သစ်စသစ်နတွေနဲ့ ရေကာတာ(အသိုက်)ဆောက်တယ်လို့ မှတ်ထားမိပါတယ်။
Castor ကတော့ ကြက်ဆူပင်လို့မှတ်ခဲ့ရတယ်။
Castor Oil ကြက်ဆူဆီဆိုရင် မီးဖွားခါနီး ၀မ်းနှုတ်ဆေး အဖြစ်သောက်ခိုင်းခဲ့ကြတယ်။
(ကြိုဆိုပါတယ် Lele လယ်လယ် လို့ခေါ်ရမလား၊လီလီ လို့ ခေါ်ရမလား)
ကျေးဇူးပါ အန်တီ ပဒုမ္မာ အခုလိုဖြည့်စွက်ပေးလို့ 
ကျမ အလုပ်လုပ့်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘော ကက်စ်ထရို ၀မ်း က ကြက်ဆူပင် နာမည်ယူထားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး. သူကပင်လယ်အောက်က Crude Oil တွေအတွက် ပိုက်တွေချပေးမှာ.
လီလီ လို့ ခေါ်လို့ ရပါတယ်. အခုလိုကြိုဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်.
မောင်ပေ. မေပေါင် ထိပ်ပြောင်…အလကားနောက်တာ.
ကျမ သူငယ်ချင်း မန္တလေးသူကို ဂေဇက်မှာ မန်ဘာဝင်ပြီး စာရေးခိုင်းတာ. မောင်ပေ့ကိုကြောက်ပြီးပြေးပြီ..
လီလီ့ ရဲ့ ပထမဆုံး ပို့ စ်ဟာ ဗဟုသုတ တိုးစေပါတယ်
လီလီလေးတင်သမျှ ကို အမြဲတမ်းအားပေးသွားပါမယ်
စကားမစပ် ဂေဇက်က ဦးကြောင်ကြီးဆိုတာ အသက်၄၀ကျော်ပါဘီကွယ်
မောင်ပေကတော့ အသက် ၃၀ မပြည့်သေးဘူး ဆိုတာလေး
ဖတ်ရှု့အားပေးလေ့လာယုံတင်မက လီလီလေးလား(ကြီးလား) တော့မသိ ဦးပေ
စကာယောင်လိုက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် အဲ့ဒီ မောင်ပေ ဆိုတဲ့လူကြီးက
အသက် ၃၀ မပြည့်သေးဘူးဆိုပေမယ့် ၂၉ နှစ်လောက်ရှိနေပြီ လီလီရေ မှတ်ထားနော်
ပြီးတော့ ဒီရွာထဲမှာက ဖွန်ကြောင်တဲ့လူတွေကများလှတယ်။
နောက်လာမည့် ပို့စ်များ ပုံများကိုလဲ စောင့်မျှော်အားပေးနေပါမည်။
မိတ်မဆက်ပေမယ့် ကျုပ်ကိုတော့ သိမယ် ထင်ပါကြောင်း..
ဂီဂီ ကမင်းသားပဲ ဂေဇက်မှာ..ဓာတ်ပုံ ပို့ တွေနဲ့စပြီးရင်းနှီးခဲ့တယ်. ဒါပေမဲ့ ကင်မရာကောင်းကောင်း မရှိသေးတော့. Intelligent mode နဲ့ ပဲရိုက်တယ်. marketing post တွေတော့နားမလည်ဘူး . ဟီး
Aladeen ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး သရုပ်ဆောင် ကွက်က သေနတ်ကိုင်ပြီး အပြေးပြိုင်တာ…
ဒီ စာဖတ်မှ ဒီ အကောင်လေးကို သိတယ်။
အပြင်မှာ တွေ့ရင် မြေကြွက် အကြီးကြီး မှတ်ပြီး ခဲနဲ့ ပေါက်မိမှာပဲ။
ဟုတ်တယ် ခိုင်ဇာ..အောက်ကလင့်မှာသွားကြည့်. အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်..
လီလီအတွက် ဦးကြောင် ဗီဗွာလေး ဖြစ်ပါရစေကွယ်.. ကိုက်ခြင်လို့…
ဦးကြောင်က ဗီဗွာလေးဆိုရင် ရောင်းစားပစ်လိုက်မှာ. ဗီဗွာမွှေးကဈေကောင်းတယ်.
တော်သေးတာပေါ့ ကြေးမုံကြီးနဲ့ ညီအမ ဆိုပြီးရန်တွေ့ ခံရပြီထင်နေတာ. ရေကာတာတွေ လာတင်လို့ .
၂ ကိုဖတ်ပြီးမှ ၁ ကိုပြန်ဖတ်လိုက်တာရယ်…
ကျေးဇူးပါ မအိ…ကျမကသူတို့ ကိုအားကျတယ်. ကိုယ်ကိုကိုယ် ပင်ပန်းလှပြီထင်နေတာ..သူတို့ ကိုမမှီဘူးရယ်.
Castroone ဆိုတော့ Saipem ပိုင် သဘောင်္၊ ….ဆိုတော့ မလီလီက Keppel ကဘဲ။
ဟုတ်ပါတယ်. pazflor ကလည်း မရိန်းဧရိယာ ကပဲလို့ ထင်ပါတယ်.
အဲ့ဒီ အကောင်လေးတွေကို မွေးထားပြီး ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့သူတွေကို ကိုက်ခိုင်းချင်လိုက်တာ မမလီလီ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်
ဗုံဗုံရေ..ဟုတ်တယ် သတ္တိခဲ ဗီဗွာ လေးတွေ..ကျေဇူးနော် အခုလိုကြိုဆိုလို့ 
အများလိုဘဲ ကြိုဆိုပါတယ် လီလီ ရေ။
ဗဟုသုတ နဲ့ ရသ စာလေးတွေ ကို အားဖြည့်ပေးမဲ့သူတိုးလာသမို့ ဝမ်းမြောက်လှပါတယ်။
ွှကျမက အရီးလတ်ရဲ့ပရိတ်သတ်ပါ. အခုလိုကြိုဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်. ကျမကစာရေးတာတတ် ဖတ်တာပိုအားသန်တယ်. အခုကြိုးစားပြီး Zawgyi one Keyboard Layout နဲ့စာရိုက်နေရတာ..ဟီး
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေတဲ့အကောင်တွေလားလို့.. ရှာလိုက်ရတာ..
ရုပ်ဆင်ပေမယ့်.. Lemming ဖြစ်နေတယ်..။
Lemmings are small rodents, usually found in or near the Arctic, in tundra biomes.They are subniveal animals, and together with voles and muskrats, they make up the subfamily Arvicolinae (also known as Microtinae), which forms part of the largest mammal radiation by far, the superfamily Muroidea, which also includes rats, mice, hamsters, and gerbils.
http://www.adfg.alaska.gov › … › Alaska Fish and Wildlife News
When they’ve exhausted the local food supply, they disperse, as do moose, beaver and many other animals. Lemmings can swim and will cross bodies of water ..
ကျေးဇူးပါ သူကြီး အဲဒီအကောင်တော့ သိဘူး.. သူတို့ က Stress တွေသိပ်များလို့လားဟင်!. ဟီး. စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်.
ကင်ပြီး ထန်းရည်နဲ့ မြည်းလိုက်စမ်းချင်တယ်..
မင်္ဂလာပါ လီလီရေ ကြိုဆိုပါတယ် နော် ( နောက်ကျနေတာ ခွင့်လွှတ်ပါ )
ဗီဗာလေးတွေက အကောင်သေးသလောက် အစွမ်းမသေးဘူးပဲ
ကျေဇူးအထူးပါ Pooch ရေ..